I-Steroids ipowder kumthetho: I-Legal okanye engekho mthethweni | AASraw Steroids powder
/Blog/steroids/I-Steroids ipowder kumthetho: I-Legal okanye engekho mthethweni
ezaposwa ngomhla 09 / 21 / 2017 by 阿斯劳 bha liweyo steroids.
I-Anabolic Steroids powder, eyaziwa ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo njenge-anabolic-androgenic Steroids powder(AAS), i-steroidal androgens eziquka ii-androgens zendalo testosteroneas kunye ne-androgens ezidibeneyo ezinxulumene ngokufanelekileyo kunye neziphumo ezifanayo
tosterone. Ziyi-anabolic kwaye zandisa iphrotheni ngaphakathi kweeseli, ngokukodwa kwimisipha yamathambo, kwaye zineziphumo ezahlukahlukeneyo zeempembelelo ze-androgenic kunye neziqhamo, kubandakanywa ukuphuhliswa kokuphuhliswa nokugcinwa kwezimpawu zesini zesini ezifana nokukhula kweentambo zamagama kunye neenwele zomzimba. Igama elithi anabolic, elibhekisela kwi-anabolism, livela kwi-anabole yesiGrike, "into ephoswe phezulu, isiqhwa." Ziyintlobo yeentlobo ezintathu sex hormone ii-agonists, ezinye zi-estrogens ezifana ne-estradiol kunye ne-progestogens njengeprogesterone.
Iingozi zezempilo zeSteroids powder
I-Anabolic steroids ayikho mthethweni ngenxa yemingcipheko yezempilo ebonakaliswe ngabanye abayithathayo. Njengehomoni enamandla, kunokubangela iziphumo ezingalindelekanga kunye nezingavumelekanga kubantu abasebenzisa kakubi ngaphaya komyalelo wonyango. Imiphumo ibandakanya:
Ukungenanto kunye nokungabi namandla kumadoda
Ukuphuculwa kwesisu kunye ne-testicular shrinkage kumadoda
Ukuphuculwa kwenyameko ebusweni kunye nomzimba kubasetyhini
Izwi elijongeyo, ukungena kwexesha lokunyanga nokunciphisa ubungakanani besifuba kubasetyhini
I-acne, isikhumba se-oily, i-jaundice, ukuguquka kwemizwelo, ukunyelisa kunye nokuqhawula kwindoda kunye nabasetyhini
Ukwanda kwengozi ye-cholesterol ephezulu, izifo zesibindi, umdlavuza wesibindi kunye nokuhlaselwa kwentliziyo
Njengezinto ezilawulwayo, i-anabolic steroids igcinwa ngokungekho mthethweni ukukhusela abantu ekuhluphekeni kwemiphumo engavumelekanga yempilo. Ukungabi namthetho kugcina uluntu jikelele olungenako ukwazi izingozi ezipheleleyo ezikhuselekileyo.
Kutheni i-Steroids i-powder engekho mthethweni kwezinye iindawo, kodwa kungekhona kwabanye?
Isizathu esona sizathu steroids asikho mthethweni kukuba zixhaphazwa kwaye ziphathwa kakubi. Xa isetyenziswe ngokungafanelekanga, i-steroids ingabangela umonakalo ngokomzimba nangokomzwelo. Zineempembelelo ezingasengozini kwimpilo yomntu. I-Steroids inokubangela ukuphuhliswa kwamathambo omzimba, isishuxu segazi, isifo senhliziyo, isifo senhliziyo, kunye nokulahleka kokuzala kunye nokuhamba kwimizi yabasetyhini. Izizathu zomthetho ze-steroids zikunceda kwiingxaki zonyango, kodwa kuphela kwiingcaphephe zogqirha. Akunobulumko (okanye umthetho) ukuthenga i-steroids kumntu ngaphandle kogqirha.
I-Steroids ithathwa njengezinto ezilawulayo kwaye zibambe isivakalisi esibuhlungu njengeziyobisi zesitalato. I-Steroids ezithengiweyo ezitrato zingenakho ezinye izinto ezingalimaza umsebenzisi. Basenokuba ngumlutha, obangela ukuba umsebenzisi athathe ngaphandle kwazo zonke iingxaki zomzimba. Ngenxa yokuba abantu abaninzi abafundanga kwi-steroids, bayisebenzisa kakubi. Kungenxa yoko, kwiimeko ezininzi, zifumaneka kuphela ngokusemthethweni kwi-pharmacy.
Xa i-Steroids powder isemthethweni
I-Anabolic steroids kuphela esemthethweni ukuba ugqirha uyayibhala. Oogqirha baya kubalela kuphela i-anabolic steroids ukuba isigulane:
Kudinga i-bone marrow stimulation okanye ukuthintela ukulahleka kwethambo:
I-1.Ifuna ukufakelwa kobudala besilisa
I-2.Ifuna ukunyusa ukutya kunye nokulondolozwa kwesisindo somzimba ngenxa yokuchithwa kweemeko ezinjenge-AIDS okanye umhlaza
I-3.Izicwangciso zenkqubo yokubuyisela isini
Xa i-Steroids ipowder ingekho mthethweni
I-Steroids ipowder ingekho mthethweni phantsi kwezi meko zilandelayo:
I-1.Akungekho mthethweni ukusebenzisa iSteroids powder yokwakha isistim ezantsi Afrika I-Anabolic Steroids ipowder ingasetyenziselwa kuphela izifo zonyango ezinxulumene nokulahleka kwemisipha kunye nokunqongophala kwe-hormone.
2.Akungekho mthethweni kumntu ngaphandle koogqirha, ikhemisti okanye omnye umqeqeshi wezempilo ukuze athengise i-anabolic i-Steroids powder, okanye nayiphi na into ebhalwe njengaleyo.
I-3.Yiyokho mthethweni ukuba ibe nabo kwifa lakho ngaphandle kwemvume.
Ufuna ukufunda ngaphezulu ngeSteroids powder, Nceda ulandele eli nqaku lilandelayo:
I-powder Steriods: yintoni i-Steroids ipowder yokwakha umzimba?
I-Flibanserin (i-Addyi): Imilinganiselo kunye nomphumo wesigxina se-flibanserin
HGH yokwakha umzimba: Yintoni kunye nendlela yokufumana iHGH?